Deg Deg:Al-Shabaab oo ka hadley hadalkii Al-Amriki ee nolashiisa ku aadanaa – SBC
Deg Deg:Al-Shabaab oo ka hadley hadalkii Al-Amriki ee nolashiisa ku aadanaa
Posted by editor on March 17, 2012 Comments
Iyadoo maanta lagu baahiyey baraha Internet-ka muuqaal ama video uu soo duubay Abuu Masnuur Al-Amriki oo ka mid ah hogaamiyeyaasha sar sar ee Al-Qaacidada Bariga Afrika kaasi oo uu ku sheegay in nolashiisu ay ku jirto qatar uuna u baqayo la noolaanshihiisa Al-Shabaab.
Hadaba qoraal kooban oo lagu daabacay bogga Internet-ka Twitter-ka ee ay adeegsadaan Shabaabku ayaa oo ay adeegsadaan ayaa lagu muujiyey sida aanay waxba uga jirin hadalkaasi .
“Waxaynu u xaqiijinaynaa walaalaha Muslimiinta in aanu Al-Amriki ku sugnayen qatar uga tumaada Mujaahidiinta, walaalkeenna wali wuxuu ku naaloonaya ama ku sugan yahay xuduuda walaaltinimada” ayaa lagu yiri warka Shabaabka soo baxay.
“Baaritaan dhab ah ayaa hada socda,xarakatul Shabaabul Mujaahidiinna waxay wadaan isku day ay ku xaqiijinayaan sax ahaanta iyo ujeedada ka dambeysa filimkaasi” ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Shabaabka ee lagu daabacay bagoodda Twitter-ka.
Markii uu Abu Maansuur saas yiri AL-Shabaabna hadalka kor ku qoran uga jawaabeen waxaa soo baxaya shakiyo badan oo ay awalba qabeen dad badan oo soomaali u badan.
Waxay egtahay in ay soo bilaamayaan arimo la sugayey.
dadka ku socda all shabaab taasaa u danbaysa warka jooga wartaasaa idiin danbaysa war aaakhirka idinka idin laynayaan warka jooga waa aragtaan ragii 6 sano usoo dagaalamayey dhibta maanta haysata warka jooga ha aadinina war taasaa idiindanbaysa ninkaa lixda sano dhiigiisii iyo naftiisii u huray maanta waad u jeedaan inla dilayo dadka muslinkaa waxaan kula talinayaa inay kajoogaan al shabaab iyo alqaacida waayo aakhirka iyagaa dilaya ama jaajuusaya waaa dad dhiiga muslimaka banaystay warka jooga waa talo
waa arin lala yaabooo ah sida daka maantay loo khaldaayo fakirkooda ama laysaga horkeenay malin malnta kadanbaysa daka waa garan layahiin waxa kadanbeeya falalka foosha xun oo ka dhacaya somalia gar ahaan muqdisha oo lagu xasuuqa dadka islaamka gaar ahaa ahlusunna waldiin hadaan wax khalad ah gaslay waa halayga raali noqda